Double Digit Ukulahlekelwa Shanela Crypto Asset Market - Blockchain Izindaba
Februwari 2, 2018 admin
Izimakethe cryptocurrency kukhona ulwandle abomvu namhlanje, ngayo yonke phezulu 10 cryptocurrencies ngemakethe cap nokubika zamadijithi double iphesenti ukulahlekelwa zokugcina 24 amahora.
Bitcoin liye lehla 16 % esikhathini esifanayo neviki-10 kuvumela ngezansi $8,000 futhi lingalimala ukulahlekelwa kwayo okubi kakhulu masonto onke (Ngaphezu kwe 25 %) kusukela ngo-Ephreli 2013. I cryptocurrency wahlupheka kwehla ngamaphesenti angu-30-ngoJanuwari kanti phansi 45 % kunyaka-to-date ngesisekelo.
ithokheni Ethereum sika-ether kwehle ngamaphesenti 28 %. I cryptocurrency wayebheke kuqhathaniswa 'azithathe ngasekuqaleni kwaleli sonto, Kubikwa ngenxa yesikhungo ngokukhululeka kwemali futhi isinqumo Venezuela ukuze presale cryptocurrency Petro emsamo ethereum. Nokho, kuheleza inkunzi ibukeka ziye zancipha futhi Eth wagcina ukubonakala ngidayisa emhlabeni $785.
Khonamanjalo, XRP ithokheni Ripple sika lifaka yesithathu ohlwini losers nge 35 amaphesenti iconsi. Manje cryptocurrency uwile ukuze $0.635 - Izinga yalo ephansi impela kusukela Dec. 15. Elandela isiqalo esibi XRP ukuba ngonyaka, nge 49 amaphesenti ukuwa ngesikhathi Januwari.
Kukonke, engqikithini ofeleba yazo zonke cryptocurrencies kuthathwe ndawonye liye lehla ezingaphezu kuka $100 bhiliyoni.
Laphaya ezansi ishadi, abatelekile inothi ezingavamile omuhle phakathi esigayegayeni sembubhiso, ithokheni igolide-wasekela okuthiwa DigixDAO (DGD) ivelele ngemva othumele 30 amaphesenti uzuza.
Kuyini ekuphambukeni? T ...
Kuvele iphephandaba Iranian ...
Ukushicilelwa t ...
Thumela Previous:Blockchain Observatory futhi Forum Oyoletha EU "phambili" ka Blockchain Tech
Thumela Landelayo:Blockchain ETF lokuqala laseCanada evunywe nabalawuli